UJohn Wick ulandela ekhondweni likaThanos eFortnite | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kunye ne-premiere ye- Abaphindezeli: Endgame abafana abavela kuMarvel nase-Epic bafikelele kwisivumelwano intsebenziswano apho bengagcinanga ngokuthengisa Umhlolokazi omnyama kunye neenkwenkwezi zeNkosi yeNkwenkwezi, Banikezela ngeNdlela yeXesha eliNqunyelweyo esivumele ukuba sifumane uthotho lwemivuzo simahla ukuba sidibana nemiceli mngeni emininzi.
Ngoku lithuba likaJohn Wick. Kunyaka ophelileyo, uFortnite ukhululwe ulusu evenkileni olufana ncam nomfanekiso kaJohn Wick. Uninzi lwabasebenzisi ababesithi nguJohn Wick ngokwakhe, nangona wayebizwa ngokusemthethweni njengoKufa (izinto zamalungelo). Ngeli thuba, abavelisi befilimu kunye no-Epic batyikitye isivumelwano sokusebenzisana esiza kusivumela ukuba sithenge isikhumba sikaJohn Wick esisemthethweni.
Olu lusu lutsha, ngeli xesha lubethelelwe emzimbeni kuKeanu Reeves, umdlali odlala olu ngcelele lweefilimu (indawo yesithathu neyokugqibela sele ikhutshiwe). Esi sikhumba Inexabiso le-2000 V-Bucks ekufuneka sidibanise enye nama-500 ukuba sifuna umlomo omile okwe hammer.
I-MTL eNtsha (Indlela yeXesha eliMiselweyo) Umvuzo kaWick iya kusivumela ukuba sifumane simahla ngokupheleleyoLogama nje sihlangabezana nemiceli mngeni ecetywayo yimivuzo emine, ezintathu zazo zizinto zobugcisa: Ukubuyisela umxhasi kwi-Token yeGolide, i-Shot eyodwa yokuxhoma, i-Boogeyman isongele kunye ne-XP yebhonasi ngaphambi kokuphela komsitho, ophela ngeCawa ezayo, ngoMeyi 19.
I-Fortnite iyafumaneka ukukhuphela Ukusuka kwiwebhusayithi yeMidlalo ye-Epic, ayikho kwiVenkile yokudlala. Zonke iintengo ezikhoyo ngaphakathi kwesicelo, zichaphazela kuphela i-aesthetics yomlinganiswa kwaye ababoneleli ngenzuzo eyongezelelweyo ngaphezulu kwabanye abadlali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » UJohn Wick ulandela ekhondweni likaThanos eFortnite